सिर्जना, कला र विचारको त्रिवेणी: 2008
Wednesday, December 31st, 2008 7:04:53 PM
बोलिभिया ः निरक्षरतामाथि विजयगाथा सुपि्रयो चटर्जी
- धावा नबोल न्यायालयमाथि प्रसंगवश : शोभाकर पराजुली
- संविधानमा आदिवासी जनजाति प्रावधान डा. कृष्ण भट्टचन
- सुपि्रयो चटर्जी अनुवाद : बिनु रिजाल 2008-12-31,Wednesday
विगत दुई शताब्दीका सरकारले गर्न नसकेको उपलब्धि इभो मोरालेसको सरकारले तीन वर्षमा हासिल गरेर देखायो । हो, बोलिभियालाई निरक्षरताको खाडलबाट मुक्त गर्न सफल भयो मोरालेस सरकार । ल्याटिन अमेरिकामा हैटीपछिको दोस्रो गरिब देश बोलिभिया हो, जो अब पूर्ण साक्षरता हासिल गर्ने तेस्रो ल्याटिन अमेरिकी राष्ट्र बनेको छ । बोलिभियाभन्दा अगाडि क्युबाले १९६१ मा र भेनेजुयलाले २००५ मा पूर्ण साक्षरता हासिल गरिसकेका छन् । बोलिभियामा शिक्षासम्बन्धी बृहत् सामाजिक परिचालन अभियान क्युबा र भेनेजुयलाको सहयोगमा सञ्चालन गरिएको हो । ती देशका सामग्रीका सहयोगमा आठ लाख १९ हजार चार सय १७ -९९.५) प्रतिशत जनता साक्षर भएका छन् । यसका लागि देशका नौ प्रान्तमा २८ हजार चार सय २४ केन्द्र स्थापना गरिएका थिए । क्युबाका एक सय ३० सल्लाहकार र भेनेजुयलाका ४७ सल्लाहकारले बोलिभियाको साक्षरता अभियानमा सहयोग गरेका थिए । क्युबाले ३० हजार टेलिभिजन सेट, त्यही संख्यामा भिडियो, १७ जोडी क्यासेट र सहजकर्ताका लागि म्यानुअल तथा १२ लाख वर्णमालाका पाठ्यपुस्तक सहयोग गरेको थियो । कयौँ सीमान्तीकृत जनता विद्युत् सुविधा नभएका दुर्गम स्थानमा बस्ने भएकाले उनीहरूका लागि क्युबा र भेनेजुयलाले आठ हजार तीन सय ५० सोलार प्यानल पनि सहयोग गरेका थिए । बोलिभिया आफैंले ४६ हजार चार सय ५७ सहजकर्ता र चार हजार आठ सय १० सुपरिवेक्षक परिचालन गरेको थियो । साक्षरता अभियानका क्रममा उनीहरूले क्युबाली अडियो, भिजुयल र 'यस आई क्यान' पद्धति प्रयोग गरेका थिए । यो साक्षरता अभियान महिलामाथि केन्दि्रत गरिएको थियो । किनभने, देशका ८५ प्रतिशत निरक्षर जनसंख्या महिला थिए । बोलिभियाको 'नेसनल अल्फाबेटाइजेसन कार्यक्रम'ले सञ्चालन गरेको यो साक्षरता अभियानको कुल खर्च तीन करोड ६७ लाख ...... लागेको थियो । बोलिभियाली, क्युबाली र भेनेजुयलावासी स्वयंसेवकले साक्षरता अभियानका लागि गरेको कडा परिश्रम शब्दमा वर्णन गर्न नसकिने खालको छ । क्युबा र भेनेजुयलाका स्वयंसेवकले आफ्नो देशभन्दा टाढा रहेर अत्यन्त ठन्डी तथा अप्ठेरो परिस्थितिसँग जुध्दै दुई वर्ष काम गरेका थिए । बोलिभियाको भिन्न वातावरणमा काम गर्दाको अनुभव यसरी सुनाउँछन् एक क्युबाली स्वयंसेवक, 'अप्ठेरो तर अत्यन्त सुन्दर अनुभव !' देशका सबैखाले स्थानमा साक्षरता कक्षा सञ्चालन गरिएका थिए । अतिप्राचीन भग्नावशेष फेला परेको क्वालाको चुक्वेसाकामा स्थानीय समुदायले म्युजियम स्थापना गरेका थिए । त्यहाँका वृद्धाश्रममा पनि साक्षरता कक्षाहरू सञ्चालन गरिएका थिए । एक ठाउँमा त सार्वजनिक स्थलमा यौनकर्मीलाई समेत साक्षरता कक्षा लिइएको थियो । मोरालेस सरकारका विपक्षीको नियन्त्रण रहेका जिल्लामा भने सहयोग पाउन अप्ठेरो भएको थियो । राष्ट्रले पूर्ण साक्षरता हासिल गरेको ऐतिहासिक दिनमा पनि दक्षिणपन्थी शक्तिले यसलाई केवल प्रोपोगान्डा भन्दै अस्वीकार गरेको देखियो । क्युबाका नेता फिडेल क्यास्त्रो र बोलिभियाका राष्ट्रपति इभो मोरालेसबीच डिसेम्बर २९, २००५ मा भएको बैठकमा यो साक्षरता अभियानको खाका कोरिएको थियो । यसको दुई महिनाभित्र, २००६ फेब्रुअरीको मध्यतिर क्युबाका सल्लाहकार बोलिभिया पुगेका थिए । यसै क्रममा मार्च १ तारिखको दिन कामिरीको सान्ता क्रुज डिपार्टमेन्टबाट साक्षरता अभियान कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । जुन महिनामा त कोचाबाम्बाबाट साक्षरता अभियानबाट पहिलो ब्याजका विद्यार्थी साक्षर भएर निस्किएका थिए । स्मरणीय छ, क्युबाको शैक्षिक पद्धति भेनेजुयलाको साक्षरता अभियानमा पनि प्रयोग गरिएको थियो । बोलिभियामा स्थानीय भाषाको आवश्यकतालाई समेट्दै क्युबाली शैक्षिक पद्धति लागू गरिएको हो । दुई लाख क्वेचुवा भाषीमध्ये अन्त्यमा २४ हजारले, तीन लाख याहामारा भाषीमध्ये ३० हजारले मात्र मातृभाषामा पढेका थिए । अन्य धेरैजसो मानिसले स्पेनिस भाषामा नै पढेका थिए । विगतमा यी भाषामा पढ्दा लज्जाबोध गरिने कारणले यस्तो भएको अभियानकर्ता बताउँछन् । साक्षरता कार्यक्रमको अर्काे चरणमा यस्तो भाषिक समस्यालाई पनि हल गर्ने अभियानकर्ता बताउँछन् । पूर्ण साक्षरतापछिको कार्यक्रम फेब्रुअरी २००९ देखि 'एस आई क्यान किप गोइङ' -हो, म गर्न सक्छु, निरन्तर अगाडि बढ) मूल नारासहित सुरु गरिँदै छ । यसको लक्ष्य भर्खरै साक्षर भएका जनतालाई स्पेनिस भाषा, गणित, भूगोल र इतिहासका प्राथमिक कक्षा पढाउनु हो । साक्षरता अभियानबाट सुरु भएको शिक्षा कार्यक्रमलाई माध्यमिक तहसम्म पुर्‍याउने र जनताको प्राविधिक सीप र ज्ञानलाई वृद्धि गर्दै लैजाने सरकारको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य रहेको छ । बोलिभियाको २००९ मा अनुमोदन गरिने नयाँ संविधानले प्रारम्भिक विश्वविद्यालय -पि्र-युनिभर्सिटी) तहसम्म सबैलाई निःशुल्क शिक्षाको प्रत्याभूति गर्नेछ । 'मानिसले लेख्न र पढ्न जानेसम्म कोही पनि अज्ञानी हुँदैन,' पूर्ण साक्षरता हासिल गरेको ऐतिहासिक अवसरमा कोचाबाम्बामा २० डिसेम्बरमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा मोरालेसले भनेका छन् । उपनिवेशवादले जनतालाई, विशेष गरी आदिवासी जनता -नेटिभ इन्डियन) लाई साक्षर गराउन नचाहेकाले निरक्षरता लामो समयदेखि कायम रहेको पनि मोरालेसले आरोप लगाएका छन् । बोलिभियाले पूर्ण सारक्षता हासिल गरेको उपलक्ष्यमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा पाराग्वेका राष्ट्रपति फर्डिनान्डो लुगो पनि उपस्थित भएका थिए । पाराग्वेमा रेड इन्डियन जातिको बाहुल्य रहेको छ, जसको अधिकांश जनसंख्या अशिक्षित छ । पाराग्वेका राष्ट्रपति लुगोले ल्याटिन अमेरिकाको चासोको विषय निरक्षरतामाथि बोलिभियाले विजय हासिल गरेको उपलब्धि आफैंमा गौरवको विषय भएको बताएका छन् । राष्ट्रपति लुगोको वचन र प्रयास हेर्दा पाराग्वेमा पनि साक्षरता कार्यक्रम विस्तारित हुने निश्चित छ । यसले इक्वेडर र पेरुका आदिवासी जनतालाई पनि सारक्षता कार्यक्रमको माग गर्न प्रोत्साहित गर्नेछ । क्युबाको शैक्षिक पद्धति अर्जेन्टिनाजस्ता अन्य देशमा पनि प्रयोग भएको छ । तर, अझै ल्याटिन अमेरिकाका असंख्य जनता निरक्षर रहन बाध्य छन् । ल्याटिन अमेरिकाको आर्थिक शक्ति मानिएको ब्राजिलमा करिब दुई करोड जनता निरक्षर छन् ।
Posted by Narthunge at 5:22 AM No comments:
Posted by Narthunge at 4:25 AM No comments:
Posted by Narthunge at 4:21 AM No comments:
Posted by Narthunge at 4:18 AM No comments:
Posted by Narthunge at 4:11 AM No comments:
Posted by Narthunge at 4:09 AM No comments:
Posted by Narthunge at 4:06 AM No comments:
Posted by Narthunge at 4:03 AM No comments:
युवाका पाँच पुँजी
नेपालमा युवा भिन्न-भिन्न प्रकारका छन्, यो स्वाभाविकै हो । युवा कसरी भिन्न-भिन्न प्रकारका भएका हुन् त ? यसको जवाफ खोज्न उनीहरूसँग के-के उत्पादनका साधन र क्षमता छन्, उनीहरूसँग चल-अचल सम्पत्ति र पुँजी कति छ भन्नेबारे वर्गीकरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । सामान्यतः नेपालका युवालाई पाँचथरी युवामा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ : पुँजीका आधारमा, उत्पादनका साधन-स्रोतको आधारमा । उनीहरूको अधीनमा उत्पादनका साधन र स्रोत कति छ भन्ने आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ । म नेपालका युवामा पाँचथरी स्रोत-साधन छ भन्ठान्छु । लामो समयसम्म स्रोत-साधन भनेको कृषि जमिन नै रहेको थियो, कृषिको उत्पादकत्व नै रहेको थियो । अहिले पनि पहिलो र मुख्य स्रोत-साधन भनेको जमिन नै हो तर अहिले अरू धेरै नयाँ-नयाँ स्रोत-साधन निर्माण भइरहेका छन् । पहिले भएका स्रोत-साधनको विस्तारीकरण पनि भइरहेको छ । तीमध्ये जग्गा-जमिनभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण हुने खालको स्रोत-साधन भनेको शिक्षा र सीप हो, जसको आधारमा युवाले जीविकोपार्जन गर्न सक्छन् । नेपालमा नयाँ शिक्षा व्यवस्था लागू भएपछि धेरै विद्यालय खुले । ०२८ सालदेखि यो व्यवस्था लागू भएपछि गाउँ-गाउँमा स्कुलको जालो फैलियो । त्यसैगरी शिक्षकहरूको आन्दोलनले गर्दा पनि शिक्षाको विस्तार भयो । यसरी हेर्दा युवाको 'करियर'का लागि महत्त्वपूर्ण स्रोत-साधनमा पहिलो जग्गा-जमिन र दोस्रोमा शिक्षा हुन आउँछ । तेस्रोमा आउँछ, केही युवाका लागि पुँजी । केही युवाले पुँजी परिचालन गरेर करियर विकास गरेका छन् । शिक्षा र जग्गा-जमिन नभए पनि उनीहरूले पुँजीको भरमा क्षमता देखाएका छन्, तर यो तप्का ज्यादै सीमित छ । चौथो स्रोत-साधन हो, केही युवामा भएको पुस्तैनी उद्यमशीलता वा व्यवस्थापकीय सीप । र, पाँचौं स्रोत-साधन हो सामाजिक पुँजी । नेपालमा महिलाको भन्दा पुरुषको सामाजिक पुँजी बढी छ । अरू सबै लिंग र जातको भन्दा बढी दलितसँग सामाजिक पुँजी कम छ । यी पाँचवटा पुँजीका आधारमा नेपालका युवालाई विभिन्न तह र तप्कामा विभाजन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
गाउँको केटी विवाह गर्ने केटा-केटीको बीचको उमेर समान हुनुपर्छ भन्छन् अनि पढाइ पनि समान । त्यसो हुनुका दुइटा कारण छन् । एउटा कारण, उनीहरु धेरै युवा छन्, उनीहरुलाई दुई वर्ष जेठो पनि बूढो लाग्छ ।
युवाको भविष्य बनाउन र जीविकोपार्जनका लागि यी र यस्ता स्रोत-साधन र पुँजी चाहिन्छ । यी स्रोत-साधन र पुँजी कोहीसँग धेरै छ, कोहीसँग कम छ, कोहीसँग छँदै छैन । स्रोत-साधन र पुँजी हुनु वा नहुनुमा गरिबपना, दुर्गमपना, महिलापनाले असर गर्छन् । युवाको सपना पनि यिनै स्रोत-साधन र पुँजीको आधारमा बनेको छ । विशेष गरी आजकलका युवाको सपना शिक्षा र सीपतिर केन्दि्रत छ । तैपनि आधाजति युवा कृषि र जमिनतिर नै छ । तर, धेरै युवाको चाहना कृषि र जमिनबाट शिक्षा र सीपतिर नै ढल्किँदै गएको छ ।गाउँले युवा र अभिभावकको चाहनागाउँमा गएर अध्ययन-अनुसन्धान गर्दा देखिन्छ, युवा मात्र होइन, बुढाबुढीसमेत आफ्ना छोराहरू गाउँमा बसून् भन्ने चाहँदैनन् । सत्तरी वर्ष पुगेका मानिसलाई पनि छोराहरू कहिलेकाहीँ बिरामी हुँदा गाउँमा बसिदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्दो हो तर पनि यहाँ बसेर उन्नति हुँदैन भन्ने तथ्य उनीहरूले बुझेका छन् । युवा र अभिभावकको सोचाइमा केही समानता र भिन्नता छ । ६० वर्षका बुढा पनि छोराहरू सहरमा बसून् भन्छन् र युवाले पनि त्यही सोच्छन् । उनीहरू छोराहरू गैरकृषि पेसामा लागून् भन्छन् र छोराहरू पनि त्यही चाहन्छन् । अधिकांश अभिभावक पनि त्यही ठान्छन् । युवा र अभिभावकको सोचाइमा केही फरक पनि छ । अभिभावकको धारणा छ, अचेलका युवा पहिलेजस्तो आदर गर्दैनन्, उनीहरू पहिलेभन्दा स्वार्थी भएका छन् । त्यसलाई अर्का अर्थमा लिने हो भने स्वार्थी बन्न बाध्य छ युवा, किनभने युवाका काँधमा नयाँ संसार, बाबुबाजेले सृजना नगरेको संसार निर्माण गर्नुपर्छ, नयाँ ठाउँमा काम गर्नुपर्छ, नयाँ चिज पढ्नुपर्छ र खासगरी आम्दानीको नयाँ स्रोत निर्माण गर्नुपर्छ । यसरी बाबुआमाबाट छुट्टएिर बसेपछि उनीहरूको सम्बन्ध पहिलेजस्तो प्रगाढ हुँदैन, यो सही कुरा हो । त्यसमा बूढाहरूले चित्त दुखाए पनि सहरमा बस्ने कुरामा, पढ्ने कुरामा सीप सिक्ने कुरामा उनीहरूको चित्तदुखाइ वा मतभिन्नता देखिँदैन । दुईछाक हातमुख जोड्ने चिन्ताबाहेक १५-२० वर्षसम्मका केटाकेटीका बाबुआमाको अर्के चिन्ता हो, बच्चाले पढेका छन्/छैनन् ? स्कुल-क्याम्पसमा जान्छन् कि जाँदैनन् ?युवालाई गरिखान देऊखासगरी नयाँ पुस्ता अगाडि बढ्न खोजिरहेको छ, तर केही नकारात्मक कुराले उनीहरूलाई कठालो समातेर पछाडि तानिरहेका छन् । अहिले गरिखाने नयाँ पुस्ताको उदय भइरहेको छ, जो बाउबाजेको जमिन छाडेर आएको छ । आफैँ पौरख गर्छु भनेर, म आफ्नै बलबुताले केही गर्छु भनेर जमिनको बन्धनबाट बाहिर आएको छ । आफैँले, आफ्नै पौरखले नयाँ स्रोत-साधन खडा गर्छु भन्ने युवापुस्ता देखिएको छ । यस्तो युवा जमात बढ्दै गएको छ । धेरैभन्दा धेरै युवा यस्तो सपना बोकर अगाडि आउँदै छन् । यसको मतलब फेरि कृषिमा युवा हुँदैनन् भन्ने होइन । तर, पहिलाको भन्दा ज्यादै कम युवा गाउँमा कृषि पेसामा हुन्छन् । अब कल्पनाको हिसाबले, सपनाको हिसाबले त विरलै युवा गाउँमा रमाउँछन् । अबको चुनौती के हो भने कसरी यी युवालाई सम्बोधन गर्ने, कसरी उनीहरूका सपनालाई सम्बोधन गर्ने ? खासगरी राजनीतिक नेता, सामाजिक नेता र व्यापारीको दायित्व हो ः यस्ता प्रश्नलाई सम्बोधन गर्नु । उनीहरूले गरिखान्छु भन्ने युवालाई गरिखान दिनुपर्छ, गर्ने ठाउँ पनि दिनुपर्छ । बजारसम्म पहँुच नभएका गाउँका युवाको पनि चाहनाचाहिँ सहर नै आउने रहेको छ । पुराना बाबुबाजेले गरेको खेतीपातीमा रमाउँदैनन् अबका युवा । अहिले सूचना र सञ्चारको विकासले गाउँका युवा र सहरका युवाको सपनामा त्यत्ति धेरै फरक छैन । भर्खरै हामी गाउँ गएर र्फकेका थियौँ, जहाँका युवायुवतीसँग कुरा गर्दा उनीहरूका सपना र चाहना अनि सहरका युवायुवतीका सपना र चाहनाका बीचमा खासै फरक पाइएन । पहिला जति फरक हुन्छ भनेर सोचेका थियौँ, त्यति फरक रहेनछ । आजकाल पहिलाजस्तो सहर छुट्टै छैन, गाउँमा सहर पसिरहेको छ । त्यसकारणले सहरको सञ्चार दैनिक रूपमा गाउँमा भइरहेको हुन्छ । सहर र गाउँमा पहिलेको जस्तो दूरी छैन, सोचाइमा पनि फरक छैन । हामीले स्कुले केटीसँग कुरा गर्दा विवाह गर्ने विषयमा सहरका केटीभन्दा बढी समानताको वकालत गर्ने हदसम्मको चेतना पायौँ । उनीहरू विवाह गर्ने केटा-केटीको बीचको उमेर समान हुनुपर्छ भन्छन् अनि पढाइ पनि समान । त्यसो हुनुका दुइटा कारण छन् । एउटा कारण, उनीहरू धेरै युवा छन्, उनीहरूलाई दुई वर्ष जेठो पनि बूढो लाग्छ । १४-१५ वर्षका केटीलाई १८ वर्षको केटा पनि बूढो लाग्छ । अर्को कारण हो, नयाँ युगको सुरुवात हुनु । सहरका स्कुल-कलेजमा पढ्ने केटीहरूभन्दा उनीहरू चार/पाँच वर्षले भए पनि कान्छा छन् । अब युवाको सपनाको कुरा गर्दा टाढा र नजिकको भन्ने कुराको अर्थ रहेन, गाउँ र सहर, सुगम र दुर्गम भन्ने पनि रहेन, पहिलेजस्तो । दूरी मेटिँदै छ, सम्बन्ध बढ्दै छ र समानता सघन हुँदै छ । त्यसकारण यी पाँचथरी युवाका सपनालाई सम्बोधन गरेर सहज जीविकोपार्जनका लागि सक्षम गराउनु नै अहिले मुख्य चुनौती हो । उनीहरूको जीविकोपार्जनको क्रममा उत्पादकत्व बढाउनु नै मुख्य चुनौती हो । जो युवा कृषि पेसामै लाग्न चाहन्छन्, उनीहरूको जीविकोपार्जन सहज पार्न कृषिलाई बजारसम्म जोड्नुपर्छ र व्यवसायीकरणका लागि अहिलेभन्दा धेरै काम गर्नुपर्छ । अर्को धेरै ठूलो पंक्ति छ, शिक्षामा लाग्नेहरूको । बच्चादेखि युवा विद्यार्थीको हिसाब गर्ने हो भने अहिले नै ८० लाख युवा छन् शिक्षा क्षेत्रमा । उनीहरूका लागि अवसर दिने कुरा मुख्य चुनौती हो । नेपालमा अहिलेको शिक्षा पहिलेभन्दा धेरै सुधार भएको छ । मुख्यतः काठमाडौंंको शिक्षाको स्तर राम्रो भएको छ । काठमाडौंबाहिरका युवालाई समेत सम्बोधन गर्ने हो भने आगामी पाँच वर्षमा काठमाडौंको शिक्षाको स्तरसम्म विकास गर्नुपर्छ । दुर्गमलाई त्यो स्तरमा ल्याउन गाह्रो भए पनि सबै जिल्ला सदरमुकाममा त्यो स्तरको शिक्षा पुर्‍याउने र अर्को १० वर्षमा सबै जिल्लाका गाउँ-गाउँमा पुर्‍याउन सकेमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुनेछ । त्यहाँका बालबालिकाले काठमाडौंको शैक्षिक स्तर पाए भने त्यो नेपालका लागि विचित्रको महत्त्वको उपलब्धि हुनेछ । त्यसले नयाँ नेपाल निर्माणका लागि साँच्चिकै बलियो आधार तय गर्नेछ, सीप, जोस, जाँगर, अठोट सबैमा बलियो जग हाल्छ । त्यसो गर्न सकेमा देशका हर क्षेत्रमा कृषि र गैरकृषि क्षेत्रमा ठूलो र राम्रो असर पर्छ, उत्पादकत्व पनि वृद्धि हुन्छ । सूचना र सञ्चारका लागि पनि खासै समस्या हुँदैन, सहजै सर्वत्र संवाद हुन्छ । अनि, हामी वास्तविक रूपमा अर्कै संसारमा पुग्न सक्छौँ- सोचका आधारमा, ज्ञानका आधारमा र सीपका आधारमा । सबै क्षेत्रमा लोकतान्त्रीकरणयसरी फड्को मार्नका लागि गर्नुपर्ने पहिलो काम हो- शैक्षकि क्षेत्रमा जबर्जस्ती हस्तक्षेप । हस्तक्षेप भनेको नकारात्मक हस्तक्षेप होइन । काठमाडौंको स्तर गाउँ-गाउँमा पुर्‍याउनका लागि सकारात्मक हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । गर्नुपर्ने दोस्रो काम हो- राजनीतिक रूपले लोकतान्त्रीकरण । राजनीतिको आधारभूत कुरा भनेकै लोकतन्त्र हो । लोकतन्त्रीकृत राजनीति र आलोचनात्मक चेतयुक्त शिक्षा भएन भने मान्छेले प्रश्न गर्न छाड्छन् र समाज, राजनीति र शिक्षा पुरानै हुन्छन् । हामीलाई पुरानो शिक्षा होइन, नयाँ शिक्षा चाहिन्छ, जसले विद्यार्थीलाई क्रियाशील बनाउने र स्थानीय मानिसले प्रश्न गरिरहने काम गर्छ, जसले सिंहदरबारको मान्छेलाई, जिल्लाको मान्छेलाई, भोलि प्रदेशको मान्छेलाई प्रश्न गरेर जवाफदेही बनाउँछ । यस्तो काम जागरुक नागरिक बनाउने राज्यव्यवस्थामा मात्रै यसखालको शिक्षा सम्भव हुन्छ । थिचोमिचो गर्ने वा एकतन्त्र लागू गर्ने सरकारले यस्तो शिक्षा प्रदान गर्न सक्दैन, त्यसरी शिक्षा विस्तार पनि गर्न सक्दैन । युवाको सपना पूरा गर्नका लागि पहिलो सर्त हो, शिक्षा र राजनीतिको लोकतान्त्रीकरण । दोस्रो सर्त हो, शिक्षा क्षेत्रको जागरुकता र साधन विस्तार । तेस्रो सर्त हो, अर्थतन्त्रको विकास र विस्तार । त्यसो नभएमा शिक्षित बेरोजगारले पढेर के हुन्छ भन्न थाल्छन् । नयाँ शिक्षा व्यवस्थाले पनि एक जमानामा प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिएको थियो । तर, मान्छेले प्राविधिक शिक्षा पढेर पनि केही भएन, किनभने अर्थतन्त्रको विकास भएन । प्राविधिक ज्ञान मात्र भएर हुँदैन, त्यसलाई उपयोग गर्नसके मात्र ठोस उपलब्धिमूलक काम हुन्छ । त्यसैले शिक्षा र राजनीतिको समग्र लोकतान्त्रीकरण, शिक्षाको जागरुकता र अर्थतन्त्रको विकास भएमा मात्र युवाको सपना पूरा हुन सक्छन्, नत्र सम्भव छैन । अहिले विशेष गरी सहरी क्षेत्रका युवाको चाहना विदेश जाने काममा केन्दि्रत हुनु स्वाभाविक हो । त्यसलाई राष्ट्रियताको सीमित दायरामा कैद गरी युवा-सपनाको खोइरो खन्नु जायज देखिँदैन । पचास वर्षअघि जब औपनिवेशिक युगको अन्त्य भएको थियो, त्यसबेला राष्ट्रियताको प्रादुर्भाव र विकास चरम रूपमा भएको थियो । किनभने राष्ट्रिय स्वाधीनता नभएको कारण त्यसबेला आममान्छेमा राष्ट्रियताको भाव जागरुक हुनु जरुरी थियो । तर, अहिले त्यस्तो औपनिवेशिक अवस्था रहेन, अहिले त्यो अस्वाधीनताको इतिहास नै समाप्त हुँदै गयो । त्यसपछि स्थापना हुन थालेको आर्थिक उपनिवेश त अहिले पनि केही हदसम्म रहेको छ । राष्ट्रियता भनेको वास्तवमा अमूर्त राष्ट्रियता होइन, यो आफू खेलेको गाउँघर, ढुंगामाटो र आफ्ना साथीभाइ सबैको सम्झना त बाहिर जानेहरूलाई रहिरहन्छ । बिदेसिने युवामा यहाँका मान्छेको माया त लागिरहन्छ । देश भन्नेबित्तिकै नक्साको याद नआउला, राजा, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको याद नआउला, तर यहाँको मानचित्र त विस्मृतिमा जाँदैन । त्यसैले हामीले पनि राष्ट्रियताको विस्तारको बारेमा यस्तो मानसिकता बोक्नुपर्छ । हामीले बिदेसिने युवाले नेपाल र नेपालीको मात्र होइन, अरू देशका नेपालीजस्तै मानिसको सेवा गरोस् भन्ने हदसम्म राष्ट्रियतालाई व्यापक बनाउनुपर्छ । पुँजीको चेपमा युवा र अभिभावक जोसग पुँजी छ, ती युवाले लगानी गरेर पनि आम्दानी गर्न सक्छन्, जसले पुँजी जम्मा गरी अगाडि बढ्न चाहन्छन्, उनीहरू पुँजीको परिचालनका आधारमा पनि अघि बढ्न सक्छन् । उनीहरू पुँजीकै आधारमा पनि आफ्ना सपना पूरा गर्न सक्छन् । अर्कोतिर खासगरी नकारात्मक सामाजिक पुँजी बोकेका युवाका सपना साकार पार्नका लागि विगतमा भन्दा केही खुकुलो हुँदै छ । यस अर्थमा अहिलेका युवाको सपना पनि पुँजीवादको वरिपरि सघन भइरहेको छ । यसमा खासगरी समस्या भनेको बाबुआमालाई पुँजीको रहेको छ । आजकलका युवाको आकांक्षा खर्चिलो छ, सपना पनि महँगो छ । यसैले बाबुआमालाई ती माग पूरा गर्ने पुँजीको अभाव हुन्छ नै । पुँजीको अभाव हुँदा केही परिवारमा द्वन्द्व पनि भएको देखिन्छ । यथार्थमा उनीहरूको यथार्थ र आकांक्षाका बीचमा खाडल देखिएको छ । परिवारका युवा ठान्छन्, बाबुले अलिकति लगानी गरेदेखि हामी धेरै कमाउँछौँ । तर, बाबुआमाले ठान्छन्, यसले गर्ला कि नगर्ला ? गरिखाएनन् भने सम्पूर्ण जायजेथा डुब्छ । यसरी आफ्ना आकांक्षा पूरा नहुँदा कतिपय युवा कुलतमा फस्ने, आपराधिक गतिविधि गर्ने र खराब कार्यमा लाग्ने गरेको पाइन्छ । त्यसलाई राम्ररी व्यवस्थापन गर्न बाबुआमा लाग्नुपर्छ । आधुनिक जमानामा प्रतिस्पर्धा धेरै हुन थालेको छ । युवाले धेरै दौडादौड गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । त्यसरी दौडँदा कसैका खुट्टा भाचिन्छन्, कसैका मर्कन्छन्, कोही लडेर घाइते हुन्छन्, यसको सुरक्षा गनुपर्ने दायित्व बढेको छ । युवाको बढ्दो आकांक्षा र भड्किलो चाहनालाई पूरा गर्ने दायित्व पूरा गर्न त पक्कै पनि गाह्रो हुन्छ । र पनि गरिखान खोज्ने युवालाई गरिखाने बाटो दिनुपर्छ । त्यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर काम गरे मात्र युवाका सपना पूरा गर्न सकिन्छ । प्रस्तुति: राजेन्द्र महर्जन र विष्णु पोखरेल
Posted by Narthunge at 6:21 AM No comments:
उनी विसं २००६ मै साहित्यमा होमिएका हुन् । तर, ००९ सालमा रेडियो नेपालले स्वर-परीक्षामा उत्तर्ीण्ा गरििदएको भए सायद उनी गायक पो हुन्थे कि - ००५ सालको आरम्भतिर उनी राजनीतिमा लागे । यसको कारण श्यामप्रसाद शर्मा थिए । श्यामप्रसाद वीरगन्जबाट भर्खर काठमाडौ“ पसेका थिए । उनी साहित्यमार्फ राजनीति र चेतनाको बीउ र्छर्दै हि“डेका थिए । श्यामप्रसादकै हुटहुटीमा उनी र समविचारका केही मित्रहरू मिलेर एउटा हस्तलिखित साहित्यिक पत्रिका निकाल्ने योजना बनाए । त्यो पत्रिका थियो, सन्देश । त्यसैमा उनको पहिलो कविता छापियो । यसको आवरण चित्र पनि उनैले कोरेका थिए । यदि साहित्यमा असफल भएका भए सायद उनी स्थापित चित्रकार पो हुन्थे कि †विसं ०६४ जेठ १६ गते रमेश विकल र नेपालबीच लामो संवाद भएको थियो, उनकै घर आरुबारीमा । त्यस दिन राजनीतिको प्रसङ्ग उक्काउ“दै उनले भनेका थिए, "त्यस समय जेलभित्र टङ्कप्रसाद, खड् गमान र रामहरहिरू थिए । बाहिर थियौ“- म, श्यामप्रसाद र फणीन्द्रराज खेताला । हामीहरू जेलभित्रको बाहिर र बाहिरको जेलभित्र समाचार ल्याउने-लैजाने गथ्र्यौं ।" श्यामप्रसाद उनीहरूका नेता थिए । एक दिन राणाशासकले यसको सुइ“को पायो र उनीहरूलाई समेत जेलमा कोचिदियो । तर, एक वर्षछि उनी र खेतालालाई तारखिमा छाड्यो । तर, श्यामप्रसादलाई ००७ सालको प्रजातन्त्र नआउन्जेल जेलमै थन्कायो । उनी आरुबारीबाट तारखि धाउन सिंहदरबार आउ“थे, पैदल । समयमै प्रजातन्त्र नआएको भए, तारखि धाउने क्रममा उनका कति जोर जुत्ता फाट्थे, अनुमान गर्न सकिन्न ।विकल डेढ वर्षो हु“दा आमा बितेकाले पिता, हजुरआमा र ठूली आमाको सुश्रुषामा उनको बाल्य र शैवशकाल बित्यो । तर, ००६ सालमा पिताकै पनि देहावसान भयो । यस पीडाले आक्रान्त भए उनी । तर, पनि यो वर्षउनका लागि वियोगान्त वर्षमात्र भएन, सुख र आनन्दका पालुवाहरू पनि फक्रिए उनको जीवनमा । यही वर्षउनी जेलबाट छुटे र यसै वर्षउनको पहिलो कथा 'गरबि' प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका शारदामा छापियो । यस मोडबाट फेरि उनले आफ्नो सिर्जनशीलताका लागि कहिल्यै पछि फर्केर हर्ेर्नुपरेन । आरुबारी गाउ“मा विसं १९८५ कात्तिक २९ गते बुधबार भाइटीकाका दिन चन्द्रशेखर उपाध्याय चालिसे र छायादेवीको पहिलो सन्तानका रूपमा उनको जन्म भएको थियो । धेरैवटा विद्यालयहरू चहारे पनि चञ्चल स्वभावका कारण उनले पढ्न सकेनन् । तर, प्राइभेट परीक्षा दिएर ०११ सालमा एसएलसी र पछि 'कलेज अफ एजुकेसन'बाट स्नातक गरे ।०१४/१५ सालको कुरा हो । उनी कलेजमा पढ्थे । स“गस“गै लोककथाहरू सुनेर तिनैका आधारमा नया“ कथा रच्न थालेका थिए । शारदापछि प्रगति पत्रिकामा पनि उनको कथा छापिइसकेको थियो । त्यसैले उनको नाम अलिअलि चर्चामा आइसकेको थियो । यही नामलाई पछ्याउ“दै बनारसका एक प्रकाशकले उनलाई विद्यालयस्तरको पाठ्यपुस्तकका लागि चारवटा बालनिबन्ध लेख्न प्रस् ताव राखे, प्रतिनिबन्ध २० रुपिया“ पारश्रिमिक पाउने गरी । "यो मेरो लेखनकालको पहिलो खुसीको क्षण थियो, यसले मलाई बालसाहित्यमा लाग्न प्रेरणा दियो," विकलले भनेका थिए । यसपछि मूलधारका कथा, उपन्यास, नाटकस“गस“गै बालसाहित्यमा पनि उनको योगदान चुलि“दै जान थाल्यो । ०१८ सालमा नया“ सडकका गीत नामक कथासङ्ग्रहमा मदन पुरस्कार पाएपछि विकल र उनको सिर्जनाले लामो फड्को मार्‍यो । त्यसपछि उनीद्वारा सिर्जित अविरल बग्दछ इन्दावती, सुनौली र सागर उर्लिन्छ आकाश छुन, बूढो भ्वाइलिन आशाबारीको धुनमा, विरानो देशमा, उर्मिला भाउजू, शव, शालिक र सहस्र बुद्धजस्ता उपन्यास-कथा तथा सप्तरङ्गी, भक्ति थापा, मिल्किएको मणि नाटक प्रमुख छन् । सात र्सर्ूय एक फन्को र नीलगिरकिो छायामा उनका प्रसिद्ध नियात्रासङ्ग्रह हुन् ।विकल अब हामीमाझ छैनन् । तर, उनले सिर्जेका साहित्यले भने उनलाई नेपाली साहित्यमा अजम्बरी बनाएका छन् ।विचारले उनी कम्युनिस्ट थिए । भनेका छन्, "म त्यसबेलाको अवस्थामा कम्युनिस्ट नै हु“ । मेरो राजनीतिक पृष्ठभूमि त्यही हो, म त्यसैबाट हर्ुर्किए“ ।" ०१५ सालपछि चाहि“ कलमको राजनीति गर्छु भनेर राजनीतिबाट सन्न्यास लिएजस्तै भए । उनी साहित्यमा राजनीति मिसिएको त्यति मन पराउ“दैनथे । उनका विचारमा सच्चा साहित्यकार सबै प्रगतिशील हुन् । "जुनसुकै स्रष्टाले पनि अगाडि नै हर्ेछ," उनले भनेका थिए, "'स्वान्त सुखायः' नलेखेर आफ्नो माटो र जनताको पीडा लेख्ने सबै नै प्रगतिशील हुन् ।" उनको परभिाषामा मार्क्सवादलाई मात्र प्राथमिकता दिएर लेख्नेहरू 'प्रगतिवादी' र मार्क्सलाई मार्गदर्शक मात्र बनाएर सिर्जना गर्नेहरू प्रगतिशील हुन् । विकलको चित्रकलातर्फो प्रसङ्ग पनि रोचक छ । उनले जुद्धकला पाठशालामा चार महिना र प्रसिद्ध चित्रकार चन्द्रमान मास्केस“ग केही समय चित्रकलाको अभ्यास गरेका थिए । यही आधारमा उनी घरमै अभ्यास गरेर राम्रो चित्रकार बनिसकेका थिए । उनले आफ्नो बेजोड सिर्जना बूढो भ्वाइलिन आशाबारीको धुनमाको आवरण आफै“ले बनाएका थिए । "अचेल त म बाथरुममा मात्र गुनगुनाउ“छु," आज पनि गीत गाउनुहुन्छ भन्दा उनले यो उत्तर दिएका थिए । त्यसो त उमेरमा उनले मञ्चमै उक्लेर पनि गीत गाएको स्वीकारेका छन् । उनलाई अम्बर गुरुङ, नारायणगोपाल र बच्चुकैलाशका गीतहरू सुन्दा आत्मीय आनन्द प्राप्त हुन्थ्यो र कुनै बेला भारतीय गायक मोहम्मद रफीका गीतहरू गुनगुनाउन आनन्द मान्थे । "म गाउने मात्र होइन, धेरैथरीका बाजा पनि बजाउ“थे“," उनी भन्थे । पछिल्लो समयमा रामेशका गीतहरूले उनलाई औधी रत्याएका थिए । रामेशको स्वरमा जीवन झल्किन्छ भन्ने उनको धारणा थियो ।उनलाई एकपटक 'कृतिचोर'को आरोप पनि लाग्यो । अविरल बग्दछ इन्द्रवती र अन्य केही कथामाथि लागेको यो आरोपका सर्न्दर्भमा उनको स्पष्ट मत थियो, "कुनै पर्ूवसिर्जनास“ग भावभूमि मिल्न जानु चोरी होइन । यो आरोप लगाउनेहरूको लघुताभास हो । म यसबाट कहिल्यै विचलित पनि भइन“ र वास्ता पनि गरनि“ ।" कालान्तरमा आज तिनै आरोपित रचनाहरू नै रमेश विकलका कालजयी सिर्जना हुनपुगे र र्सवाधिक पढिने रचनामा गणना भए ।कालजयी स्रष्टा रमेश विकललाई शब्द-श्रद्धाञ्जलि । Raman Ghimire
Posted by Narthunge at 6:16 AM No comments:
Posted by Narthunge at 5:29 AM No comments:
के त्यस्तो व्यक्तिले समाजवादका बारेमा विचार व्यक्त गर्नु उचित छ, जो आर्थिक-सामाजिक मामिलाको विशेषज्ञ होइन ? कयौँ कारणले गर्दा मलाई लाग्छ- यो उचित छ । अर्थशास्त्र र समाजवाद ः सबैभन्दा पहिले वैज्ञानिक ज्ञानको दृष्टिकोणबाट यस सवालमाथि विचार गरौँ । खगोल-विज्ञान र अर्थशास्त्रबीचको कार्यपद्धति -मेथोडोलोजी) मा कुनै मूलभूत भिन्नता नै छैन भन्ने लाग्न सक्छ । यस्तो प्रतीत हुन सक्छ, यी दुवै क्षेत्रमा वैज्ञानिकले कुनै घटना-क्रियाहरू -फेनोमेना) का अन्तरसम्बन्धलाई यथासम्भव स्पष्ट ढंगले सम्झन-बुझ्नलायक बनाउनका लागि ती घटना-क्रियाको एउटा सीमित समूहका लागि सामान्य स्वीकार्य नियमहरू खोज्ने प्रयास गर्छन् । तर, वास्तवमा, यी दुवै विज्ञानका बीच कार्यपद्धतिको भिन्नता विद्यमान छ । अर्थशास्त्रका क्षेत्रमा सामान्य नियमहरूको खोज विभिन्न कारणले कठिन हुन्छ । किनकि, जुन आर्थिक घटना-क्रियाहरूको हामी निरीक्षण गर्छौं, तिनलाई धेरै त्यस्ता कुराले प्रभावित गर्छन्, जसको मूल्यांकन अलग ढंगले गर्न निकै कठिन छ । यसका अतिरिक्त, सबैलाई थाहै छ- मानव इतिहासको तथाकथित सभ्यकालको सुरुदेखि नै सञ्चित अनुभवहरू त्यस्ता कारणबाट धेरै नै बढी प्रभावित र सीमित भैरहेका छन्, जुन स्वभावतः कुनै पनि हिसाबले आर्थिक कारण मात्र होइनन् । उदाहरणका लागि, इतिहासमा धेरैजसो ठूला राज्यहरूको अस्तित्वको आधार भनेको बल प्रयोगद्वारा गरिएको विजय थियो । विजेताले कानुनी र आर्थिक रूपले आफूलाई विजित देशका विशेषाधिकार प्राप्त वर्गका रूपमा स्थापित गरे । तिनीहरूले भू-स्वामित्वका क्षेत्रमा आप\_mनो एकाधिकार कायम गरे र आफूहरूबीचका मानिसमध्येबाट नै पुरोहित नियुक्त गरे । पुरोहितले शिक्षामाथि नियन्त्रण राख्ने काम गरे । समाजको वर्ग-विभाजनलाई एउटा स्थायी संस्थाको रूप दिए । अनि, उनीहरूले मूल्यहरूको एउटा व्यवस्था रचना गरे, जसबाट त्यसै समयदेखि धेरै हदसम्म अचेतन रूपले मानिसको आप\_mनो सामाजिक व्यवहार निर्देशित हुन थाल्यो । थोस्टिर्यन वेब्लेन -अर्थशास्त्री तथा समाजशास्त्री, १८५७-१९२९) द्वारा बताइएको मानव विकासको 'लुटपाटको अवस्था' भनेको, भन्नलाई मात्रै विगतका दिनहरूको ऐतिहासिक परम्परा हो, किन्तु हामी आजसम्म पनि त्यस अवस्थाभन्दा अगाडि बढ्न सकेका छैनौँ । जुन आर्थिक तथ्यहरूको हामी निरीक्षण गर्न सक्छौँ, ती त्यही अवस्थाका हुन्, र त्यसबाट निकालिएको नियम पनि अन्य अवस्थामाथि लागू हुन सक्दैन । समाजवादको वास्तविक लक्ष्य सुनिश्चित रूपले मानव विकासलाई यस लुटपाटको अवस्थाबाट पार गराउनु र यस अवस्थाबाट अगाडि बढाउनु हो, त्यसैले आप\_mनो वर्तमान स्थितिमा आर्थिक-विज्ञानले भविष्यको समाजवादी समाजमाथि अलिकति भए पनि प्रकाश पार्न सक्छ । दोस्रो विचारणीय पक्ष के हो भने समाजवादको विकासको दिशा एउटा सामाजिक-नैतिक लक्ष्यतिर निर्देशित छ । विज्ञानले न लक्ष्यहरूको निर्माण गर्न सक्छ, न त त्यसलाई मानिसभित्र पोख्न नै सक्छ । विज्ञानले बढीभन्दा बढी कुनै लक्ष्य प्राप्त गर्ने साधन जुटाउन सक्छ । तर, यी लक्ष्य स्वयं उदात्त नैतिक आदर्शले युक्त व्यक्तित्वद्वारा मात्र तय गरिन्छ । यदि यी लक्ष्य मुर्दा नभैकन, जीवन्त र ओजस्वी छन् भने ती धेरै-धेरै मानिसद्वारा अपनाइनेछन् अनि अगाडि पनि बढाइनेछन् । यस्ता मानिसले अर्द्धअचेतन रूपले भए पनि समाजको मत्थर-विकासलाई निर्धारित गर्नेछन् । यिनै कारणले गर्दा, मानवीय समस्याको सवालमाथि हामीले विज्ञान र वैज्ञानिक पद्धतिलाई आवश्यकताभन्दा बढी आँकेर हेर्नु हुँदैन । र, यिनै कारणले गर्दा समाजको संगठनलाई प्रभावित गर्ने सवालबारे अभिव्यक्तिको अधिकार केवल विशेषज्ञलाई मात्र छ भनेर पनि मान्नु उचित हुँदैन । सामाजिक संकटको समाधान ? ः अनगिन्ती मानिसहरू केही समययतादेखि के कुरामाथि जोड दिइरहेका छन् भने मानव समाज एउटा संकटको स्थितिबाट गुजि्ररहेको छ र यसको स्थिरता भयंकर रूपले छिन्न-भिन्न भएको छ । यो एउटा यस्तो स्थितिको लक्षण हो, जब मानिस पहिलेदेखि आफू जोडिएको सानो वा ठूलो समूहप्रति उदासीन वा अनासक्त हुन थाल्छन्, कहिलकाहीँ त शत्रुतापूर्ण भावसमेत महसुस गर्न थाल्छन् । आप\_mनो यस कुरालाई स्पष्ट पार्नका लागि म एउटा निजी अनुभव बताउन चाहन्छु । हालै मैले एकजना प्रबुद्ध सज्जनसँग एउटा अर्को युद्धको खतराका बारेमा कुराकानी गरेँ, जुन युद्धले मेरा विचारमा मानवताको अस्तित्वलाई नै गम्भीर संकट पैदा गर्नेछ । मैले उनलाई के भनेँ भने त्यस्तो खतराबाट केवल एउटा राष्ट्र- राष्ट्रभन्दा माथिको -सुप्रानेसनल) संगठनले मात्र रक्षा गर्न सक्छ । यसबारेमा मेरा अतिथिले अत्यन्त शान्त र ठन्डा ढंगले भने- 'तपाईं मानवजाति नष्ट हुने कुराविरुद्ध यति गम्भीरतापूर्वक किन विरोध गर्नुहुन्छ ?' म यकिनका साथ भन्न सक्छु ः कमसेकम एक शताब्दीअगाडिसम्म कसैले पनि यति हलुका ढंगले यस सम्बन्धमा यस्तो किसिमको विचार दिएको छैन होला । यो एउटा त्यस्तो मानिसको विचार हो, जसले आफूभित्र सन्तुलन स्थापित गर्नका लागि निरर्थक प्रयास गरिरहेको छ र धेरै हदसम्म यसमा सफल हुने आशासमेत मारिसकेको छ । यो एउटा यस्तो दर्दनाक एक्लोपन र पीडादायी अलगावको अभिव्यक्ति हो, जसबाट आजभोलि धेरै मानिस पीडित छन् । यसको कारण के हो ? के यसको कुनै समाधान त छ ? यस्ता प्रश्न गर्नु सजिलो छ, तर कुनै पनि हदसम्मको भरोसिलो जवाफ दिन कठिन छ । फेरि पनि जहाँसम्म सकिन्छ, म जवाफ दिने प्रयास अवश्य गर्नेछु । यद्यपि हाम्रा अनुभूति र हाम्रा प्रयास धेरैजसो यति अन्तरविरोधी र दुरूह हुन्छन् कि ती सजिला र सीधा-साधा सूत्रहरूमा व्यक्त गर्न नै सकिँदैनन् भन्ने तथ्यप्रति म काफी सचेत छु । समाज र व्यक्तिको अन्तरसम्बन्ध ः मानिसहरू एकै समयमा र एकैसाथ एक्लो प्राणी पनि हुन् र सामाजिक प्राणी पनि । एउटा एक्लो प्राणीको हैसियतले मानिसले स्वयंको र आप\_mना सबैभन्दा नजिकका मानिसको रक्षाको प्रयास गर्छ र आप\_mना निजी इच्छाहरूको तृप्तिको प्रयत्न गर्छ तथा आप\_mना सहज योग्यताको विकासका लागि प्रयत्न गर्छ । एक सामाजिक प्राणीका रूपमा उसले आफूनिकट रहने मानिसबीच मान्यता पाउन, उनीहरूबाट स्नेह पाउन, उनीहरूका खुसीमा भाग लिन र उनीहरूको दुःखका वेलामा आरामको व्यवस्था गर्न तथा उनीहरूको जिन्दगीका कठिन परिस्थितिमा सुधार गर्न कोसिस गर्छ । कुनै पनि मानिसको विशिष्ट चरित्रका पछाडि केवल यस्तै विविध र अत्यन्त परस्पर विरोधी प्रयासकै अस्तित्व हुन्छ । यिनै प्रयासको विशिष्ट संयोजनले नै त्यस सीमालाई निर्धारण गर्छ, जुन सीमासम्म कुनै मानिसले आन्तरिक सन्तुलन प्राप्त गर्न सक्छ तथा समाजको हितका लागि योगदान गर्न सक्छ । के कुरा बिल्कुल सम्भव छ भने यी दुवै प्रवृत्तिहरूको सापेक्षित शक्तिको निर्धारण मुख्यतः वंशानुक्रमद्वारा हुन सक्छ । किन्तु, अन्तिम रूपमा जुन व्यक्तित्व विकसित भएर अगाडि देखापर्छ, त्यस व्यक्तित्वको निर्धारण गर्ने काम मुख्य रूपमा सामाजिक परिवेशबाट हुन्छ । व्यक्ति स्वयंले आप\_mनो विकासका क्रममा पाउने त्यस परिवेशद्वारा, ऊ हुर्कने-बढ्ने समाजको त्यस ढाँचाद्वारा, त्यस समाजका परम्पराद्वारा र खास-खास व्यवहारप्रति त्यस समाजको मूल्यांकनद्वारा उसको व्यक्तित्व निर्धारण गर्ने काम हुन्छ । कुनै पनि एक्लो व्यक्तिका लागि 'समाज'सम्बन्धी अमूर्त धारणाको अर्थ होः आप\_mना समकालीन र अघिल्लो पुस्ताका सबै मानिससँग उसको प्रत्यक्ष र परोक्ष सम्बन्धको कुल जोड । व्यक्ति सोच्न, महसुस गर्न, प्रयास गर्न र कार्य गर्नमा आफैं सक्षम छ । किन्तु ऊ आप\_mना शारीरिक, बौद्धिक तथा भावनात्मक अस्तित्वका लागि समाजमाथि यति बढी निर्भर छ कि समाजको सीम्ााभन्दा बाहिर उसका विषयमा विचार गर्नु र त्यसलाई बुझ्नु असम्भवप्रायः छ । यो त्यही नै 'समाज' हो, जसले मानिसलाई भोजन, वस्त्र, आवास, कामको औजार, भाषा, विचारहरूको रूप र त्यसका अधिकांश अन्तर्वस्तु दिन्छ, उसको जीवन वर्तमान र विगतका ती लाखौँ-लाख मानिसको श्रम र कौशलको कारणले मात्रै चलिरहेको हुन्छ, ती सबै मानिस यो छोटो शब्द 'समाज'को पछाडि हराइरहेका हुन्छन् । मानिसको प्राकृतिक र सांस्कृतिक संरचना ः त्यसैले के कुरा स्पष्ट छ भने समाजमाथि व्यक्तिको निर्भरता प्रकृतिको एउटा त्यस्तो वास्तविकता हो, जसलाई समाप्त पार्न सकिँदैन, ठीक कमिला र माहुरीका विषयमा जस्तै ः तर, जहाँ कमिला र माहुरीको पूरा जीवन-प्रक्रियाको सानोभन्दा सानो कुरा पनि वंशानुगत प्रवृत्तिद्वारा सख्त रूपमा निर्धारित हुन्छ, त्यहीँ मानिसका तौर-तरिकारहरू र अन्तरसम्बन्धचाहिँ परिवर्तनशील हुन्छन् र परिवर्तनप्रति अति संवेदनशील हुन्छन् । स्मृति, नयाँ संयोजनहरू निर्माण गर्ने क्षमता र मौखिक संवादको गुणद्वारा मानिसमा त्यस्ता विकास सम्भव भएको छ, जुन जैविक आवश्यकताकद्वारा निर्दिष्ट हुँदैनन् । यस्ता विकासले परम्परा, संस्था र संगठनमा, साहित्यमा, वैज्ञानिक एवं इन्जिनियरिङका उपलब्धिमा, कलाकृतिमा स्वयंलाई अभिव्यक्त गर्छन् । यसबाट स्पष्ट हुन्छ- मानिसले कसरी एउटा निश्चित अर्थमा आप\_mनो जीवनलाई स्वयं आप\_mनै व्यवहारद्वारा प्रभावित गर्न सक्छ । यस प्रक्रियामा सचेत चिन्तन र चाहनाले एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छन् भन्ने कुरा पनि यसबाट स्पष्ट हुन्छ । मानिसले जन्मेदेखि नै आनुवंशिकतामार्फत् प्रकृतिका स्वाभाविक आवश्यकतासहित एउटा जैविक संरचना पाउँछ, जुन आवश्यकता मानवजातिका लाक्षणिक विशेषता हुन् । यस संरचनालाई हामीले स्थिर र अपरिवर्तनीय मान्न सक्छौँ । यसका साथै, आप\_mनो जीवनकाल व्यतीत गर्ने क्रममा उसले एउटा सांस्कृतिक संरचना पनि पाउँछ, जसलाई उसले संवादहरू र अन्य धेरै प्रकारका प्रभावमार्फत् समाजबाट ग्रहण गर्छ । यो सांस्कृतिक संरचना नै त्यो चीज हो, जुन समयसँगसँगै परिवर्तन हुँदै जान्छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, यही सांस्कृतिक संरचनाले नै व्यक्ति र समाजबीचको सम्बन्धलाई अति धेरै हदसम्म तय गर्छ । आधुनिक नृतत्वशास्त्रले तथाकथित आदिम संस्कृतिको तुलनात्मक खोजमार्फत हामीलाई सिकाएको छ- मानिसका सामाजिक व्यवहारमा व्यापक अन्तर हुन सक्छ, किनकि यी कुरा समाजमा प्रभुत्व जमाइरहेका प्रचलित सांस्कृतिक प्रतिमान र संगठनका स्वरूपमा निर्भर हुन्छन् । कुनै मानव समुदायको उन्नतिका लागि प्रयासरत मानिसले आप\_mना आशाहरू के कुरामाथि आधारित गर्न सक्छन् भने आप\_mनो जैविक संरचनाको फलस्वरूप, एक-अर्काको विनाश गर्नका लागि वा कुनै क्रूर र आत्मघाती स्थितिको दयामा भर परिरहनका लागि मानवजाति अभिशप्त छैन । मानौँ, हामीले आफैंलाई प्रश्न गर्‍यौँ ः मानव-जीवनलाई यथासम्भव सन्तोषजनक बनाउनका लागि समाजको संरचना तथा व्यक्तिको सांस्कृतिक दृष्टिकोण कसरी बदल्ने ? यसको जवाफ खोज्दा हामीले बदल्न नै नसकिने केही विशिष्ट परिस्थिति हुन्छन् भन्ने वास्तविकताका बारेमा हामी सतत् रूपमा सचेत रहनुपर्छ । मैले अगाडि नै के भनिसकेको छु भने- व्यावहारिक अर्थमा मानिसको जैविक प्रकृतिलाई परिवर्तन गर्न सकिँदैन । त्यसै गरी विगतका केही शताब्दीका प्राविधिक र जनसांख्यिक विकासद्वारा निर्मित परिस्थिति पनि यथावत् रहिरहने कुरा हुन् । अपेक्षाकृत रूपमा घना बस्ती भएका आवादीको अस्तित्वका लागि अपरिहार्य सामग्रीको आपूर्ति गर्न एउटा चरम श्रम-विभाजन तथा अत्यन्त केन्द्रीकृत उत्पादनतन्त्र परम् आवश्यक हुन्छ । अतीततिर हेर्दा निकै रमणीय लाग्ने त्यो समय, सधैँका लागि गुजि्रसकेको छ, जुनवेला व्यक्ति वा सापेक्षिक रूपमा सानो समूहसमेत पूर्णतः आत्मनिर्भर रहन सक्थ्यो । मानवजातिले अहिले मात्रै उत्पादन र उपभोगको एउटा विश्वव्यापी समुदायको रचना गरेको हो भन्ने कुरा भन्नु धेरै अतिशयोक्तिपूर्ण नहोला । (बाँकी आगामी अंकमा)
Posted by Narthunge at 5:25 AM No comments:
Posted by Narthunge at 5:37 AM No comments: